Somaliland: Muuse Biixi (Madaxweynaha) iyo Mucaaridku way Taageereen Heshiiskii Khaatumo iyo Somaliland’ + Muuqaal - Wargane News
Home Somali News Somaliland: Muuse Biixi (Madaxweynaha) iyo Mucaaridku way Taageereen Heshiiskii Khaatumo iyo Somaliland’...
Somaliland: Muuse Biixi (Madaxweynaha) iyo Mucaaridku way Taageereen Heshiiskii Khaatumo iyo Somaliland’ + Muuqaal
Hoggaamiyihii maamulkii Khaatumo Prof. Cali Khaliif Galaydh, ayaa ka hadlay heshiiskii ay dhawaan xukuumadda Somaliland ku kala saxeexdeen magaalada Caynaba iyo kulamo uu la yeeshay madaxweynaha cusub.
Prof. Cali Khaliif, waxa uu sheegay in kulamo uu la yeeshay madaxweynaha la doortay iyo hogaamiyeyaasha labadda xisbi mucaaridka ee UCID iyo Waddani, isla markaana ay si isku mid ah u soo dhaweeyeen heshiiskaasi iyo in Khaatumo ay la midawdo Somaliland.
Cali Khaliif ayaa sidoo kale ka hadlay rejadda uu ka qabo in madaxweynaha la doortay Muuse Biixi Cabdi, uu sidiisa u fuliyo heshiiskii ay dhawaan wada gaadheen Khaatumo iyo Somaliland.
Isagoo ka hadlayay kulanka uu la yeeshay madaxweynaha la doortay iyo arrimihii ay ka wadda hadleen, waxa uu yidhi “Waan is aragnay madaxweynaha la doortay. Imika intii la doortay ilaa laba jeer ayaan kulanay, wakhti badana waanu isku helnay. Waxyaalaha aanu ka hadlaynayna arrimaha guud ee Somaliland ayay ahaayeen.
Xisbiga Kulmiye ee uu Muuse Biixi, ka tirsanaa ayaa taladda hayay markii aanu Somaliland heshiiska la gelanay, ragg xisbiga ka mid ah ayaan muddo laba sanadood ah hawshaasi wada wadnay. Muuse-na wuxuu ahaa nin maamulka xisbiga Kulmiye iyo mus-danbeedka ah, markaa wixii aanu hore ugu soo heshiinayna wuu la socday, tii ayuunbaanu imikana isla soo qaadnay”.
Prof. Galaydh, ayaa amaanay qaabkii ay doorashadii madaxtooyadda ee 13-kii November u dhacay, isagoo ku amaanay xisbiyadda iyo shacabkaba in doorashadaasi ay si nabad ah ku dhamaatay.
“Doorashadii madaxtooyadda oo aan anigu runtii isaga iyo xisbiyadda kale ee mucaaridka ah iyo shacabka Somaliland-ba aan ku bogaadiyay, sidii nidaamka fiican ahayd ee nabadda wax waliba ay ku dhamaadeen”ayuu yidhi Cali Galaydh oo shalayu waramayay BBC.
Sidoo kale waxa uu ka hadlay aragtidda madaxweynaha la doortay iyo hogaamiyeyaasha mucaaridka ee ku aadan heshiiskii Khaatumo iyo waxaanu yidhi “Muuse Biixi iyo labadda xisbi ee mucaaridka ah madaxdoodda intuba taageero buuxda ayay wada siiyeen wada hadaladii iyo heshiiskii aanu la galnay Somaliland. Intii lagu jiray ololihii doorashadda saddexda musharaxba khudbadahooda way ku soo darayeen heshiiskaasi, imika intii doorashadu dhacday kadibna saddexda-ba waanu is argnay.
Waxaana nasiib wanaag ah in saddexdooduba ay leeyihiin heshiiskaasi 100% waanu taageeraynaa, waa in halkii uun laga sii amba qaadi lahaa in heshiiskaasi uu hirgallo, ayay diyaa ru wada yihiin”.
Horjoogaha Kooxda Khaatumo Prof Cali Khaliif Galaydh
Somaliland: Garabka Jamaal Oo Maanta Wada Hadal La Bilaabaya Xisbiga Waddani
Juventus oo qorsheeneysa in Robert Lewandowski ay ka dhigato badalka Gonzalo Higuaín
Somaliland: Cali Khaliif Waa Abahay Waana Macalinkaygii Wax I Baray Sacad Cali Shirre
Somaliland: Ergaygii Midowga Yurub Oo Guuldarro Kala Carraabay Hargeysa Oo Uu U Yimid Muranka Xubno Ka Tirsan Guddiga Cusub Ee Doorashada
Somaliland: Daawo Xukuumadda Somaliland Oo Lacagtii Doorashada Ku Wareejiyey Guddiga Komishanka Qaranka Somaliland
Somaliland: Xubno Laga Saaray Xisbiga Ka Arimiya Itobiya Iyo Sababta Looga Saaray